Pep Guardiola oo indhaha ku haaya bartilmaameedka kooxaha Barcelona iyo Liverpool – Gool FM - Idman news
Pep Guardiola oo indhaha ku haaya bartilmaameedka kooxaha Barcelona iyo Liverpool – Gool FM
(Yurub) 29 Luulyo 2020. Kooxaha Liverpool, Manchester City iyo Barcelona ayaa waxay dagaal xoogan ugu jiraan sida ay isaga xoojin lahaayeen qeybta gadaale ee daafaca, waxayna u muuqataa in saddexda koox ay leeyihiin ujeedo guud.
Daafaca kooxda kubadda cagta Seville ee Diego Carlos, ayaa noqday bartilmaameedka kooxaha Liverpool, Manchester City iyo Barcelona, kaddib markii uu xilli ciyaareed cajiib ah ku qaatay horyaalka La Liga ee dalka Spain, wuxuuna kooxdiisa ku hoggaamiyay inay u soo baxdo tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe ee 2020/2021.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Telegraph” ee dalka England, tababare Pep Guardiola ayaa wuxuu indhaha ku haayaa horumarka Diego Carlos, isagoo doonaya inuu la soo saxiixdo suuqan xagaaga, gaar ahaan maadaama ay Man City u baahan tahay daafac wanaagsan ee ka garab ciyaari kara Aymeric Laporte.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Manchester City ay ka war qabto sida ay ugu adag tahay inay la soo saxiixato daafaca kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly, sababa la xiriira qiimaha la dul dhigay oo aad u sarreeya, sidaas darteed Pep Guardiola wuxuu aaminsan yahay in Diego Carlos uu noqon doono kan ugu fiican ee ka garab ciyaara Aymeric Laporte.
Dhinakaca kale kooxda Liverpool ayaa xiiseyneysa inay hesho adeega Diego Carlos, si ay kaga dhigato badelka bixitaankii Dejan Lovren, si la mid ah Barcelona ayaa waxay ku fikireysaa inay ka dhigato badelka daafaceeda reer Spain ee Gerard Pique.
Waxaa la rajeynayaa in heshiiska Diego Carlos uu ku kici doono qiyaastii qiimo dhan 65 million euros, iyadoo laga war qabo in kooxda Seville lagu yaqaano inay ka soo baxaan daafacyo aad u wanaagsan, oo kii ugu dambeeyay uu ahaa Clément Lenglet oo ay ka afduubatay naadiga Barcelona.
Previous Daafacii ugu adkaa uu ka hor yimid, kulankii ugu muhiimsanaa ee xirfadiisa, abaal-marinta Ballon d’Or & dhowr arrimood uu ka hadlay Benzema
Next Waa kuwee labada xiddig ee ka tirsan Chelsea, kuwaasoo ku qanciyey Kai Havertz inuu xagaagan kula soo biiro Kooxda Blues? – Gool FM